बिध्नहर्ता श्रीगणेशले सबैको रक्षा गरुन, फाल्गुन २९ गते मंगलबार मार्च १३ को राशिफल – Todays Nepal
बिध्नहर्ता श्रीगणेशले सबैको रक्षा गरुन, फाल्गुन २९ गते मंगलबार मार्च १३ को राशिफल
By टुडेज नेपाल	 On Mar 13, 2018
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल फाल्गुन २९ गते मंगलबार इश्वी सन २०१८ मार्च १३ तारीख चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी तिथी १३ः३४ बजे सम्म पश्चात द्वादशी तिथी चन्द्रमा मकर राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु पापमोचनी एकादशी व्रत – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
सभा सम्मेलनमा सरीकहुने अवसर प्राप्त हुनेछ । मानसीक चन्चलताले सताउन सक्नेछ । तपाइृको कार्यको फाईदा गैर ब्यक्ति हरुलाई सहजै प्राप्त हुनेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित गर्नाले मान सम्मानको योग रहनेछ ।
मित्रतथा दाजुभाई हरुको साथ सहयोग यथेष्ट प्राप्त रहनेछ । मनोरञ्जनात्मक यात्राको सम्भावना रहेको छ । प्रिय मित्रजन सगँको भेट घाटमा सामान्य खर्चको योग रहेको छ । मातृ पक्षको स्वास्थमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
साजेदारीकाममा भने मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबशर प्राप्त रहनेछ । सामान्य स्थान्तरणका कारण कार्य क्षेत्रमा साधारण झन्भट ब्यर्होनु पर्नेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ ।
पारीबारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । कार्यसम्पादनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । शारिरीक आलस्ताले सताउन सक्छ । खानपानको क्षेत्रमा समय राम्रो रहेको छ । पती पत्नि बिच मन मुटाब हुन सक्ला ।
खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । आर्थिक अभाबको सामन गर्नु पर्ला । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ ।
तपाईको कार्य कुशलताले अरु ब्यक्तिलाई मोहित बनाउन सक्छ । पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ । आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्नाले मनमा उत्साहा छाउनेछ । अरुको भर पर्नाले सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला ।
सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु होला । सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । आम्दानि मध्यम रहला ।
आटँ शाहसमा बृद्यि हुनाले तपाईका बिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । सामान्य यात्रा हुनसक्ला । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ ।
खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी समास्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउन सक्छ ।
मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन । तपाईको सरल मिजासले मित्रजनहरु आर्कशित हुने योग रहेको छ ।
खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ ।
कार्य कुशलताले गर्दा सबै क्षेत्रमा चर्चा चल्नेछ । कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोले मन प्रशन्न रहला । आकस्मीक धन लाभको योग रहेको छ । हराएका सामान हरु फेला पर्न सक्नेछन । नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला ।
यी दिशामा सिरानी राखेर सुत्दै नसुत्नुहाेस्, आइपर्छन् यस्ता समस्याहरू
कसले भन्यो बिधार्थीले अस्ट्रेलीयामा पन्द्र सय डलर हप्ताको कमाउँछ भनेर ?